Wararkii ugu Danbeeyey Dagaalka Itoobiya Kusoo Qaaday Soomaaliya.
Galkacyo: puntaland oo sheegtay in ay gacanta ku dhigtay maxaabiis maxkamadaha ah.
Dec 24: waraka ka imaanaya magaalada Galkacyo ee xarunta Gobalka Mudug ayaa sheegay in xaaladau ay hada dagantahay dagaalna uusan caawa jirin kadib markii gacanta ay u gashay magaalada bandiiradley ciidamada puntland sida ay sheegayaan waraka halkaasi ka imanaya.
20 ka mid ah ciidamada maxkamada ayaa gacanta u galay kuwa puntland 8 kamid ahna ay dhaawacyihin kuwaas oo lagu dawaynayo isbitaalka guud ee magaalda Galkacyo sid aya sheegayaan saraakiisha ciidamada puntland ee ku sugan magaalada galkacyo.
Puntland ayaa asidoo kale xaqiijinaysa in ay gacanta ku dhigtay magaalada Bandiiradley ilaa iyo hada ma jiraan warar ka soo baxaya dhanka maxkamadaha oo xaqiijinaya wararka ka soo yeeraya dhinaca puntland.
si kastaba saaka ayay ahayd markii ay diyaaradaha qumnaatiga u kaca ee dawlada Ethiopia ay duqayn u gaysteen magaaalda baladwayne ee xarunta gobalka hiiraan waxaana soo abxay wararka sheegaya in ay si toos ah oo bereere ah ay haatan ugu lug leedahay dagaalda ka dhacaya dalka somalia dawlada Ethiopia halkii ay dagaaladii ilaa maalmahaan ka dacay dalka somalaia ay beeninaysay dawlada Ethiopia.
Dhinaca kalena dawlada Ethiopia ayaa maanta qiratay in ay si toos ah dagaal cir iyo dhul ah ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee ay colaadaha iyo dagaaladu la dageen ee somalia war ka soo baxay xafiiska raisal wasaaraha aha dalka Ethiopia ayaa lagu shegay in dagaal kharaar oo cirka iyo dhulka ah ay dawlada Ethiopia la gashay maanta dalka somalai taasi oo xaqiiqadeeda laga dareemay diryanka iyo rasaasta ay ciidaamada cirka ee dalka Ethiopia ku soo riden meelo badan oo ka mid ah Gobalka Hiiraan.
Ilaa iyo hada waxaa la xaqiijinayaa in ay gantaalka ay soo riday diyaaradi uu ku dhacay dhabaha diyaaradaha ee magaalada Baladwayne